MX-Linux 19 - Beta 1: Distrowatch Distro # 1 yakagadziridzwa | Kubva kuLinux
MX-Linux 19 - Beta 1: Distrowatch Distro # 1 inogadziridzwa
Nhasi, tichataura nezvazvo «MX-Linux», yakanaka «Distro GNU/Linux» izvo kwete izvi chete zve kutanga mune chinzvimbo cheiyo Distrowatch webhusaiti zvekuve yakajeka, yakanaka uye ine hunyanzvi, asi nei akapa zvakawanda zvekutaura nezvake isiri-yekuchengetedza nzira, uye yake yakasarudzika maitiro uye inonakidza yega kurongedza.
Sei mune vamwe zvinyorwa zvakapfuura mukati meBlog, tambotaura zvakadzama nezve chii «MX-Linux» y zvinotitendera kuti tiite «MX-Linux», nhasi tichataura zvakananga pamusoro penyaya dzakabatanidzwa mune ino yekutanga beta yenguva yemberi «versión 19»kufona «Patito Feo», uye nzira yayo yekumisikidza.
Nekudaro, zvinogara zvichikosha kusimbisa kubva «MX-Linux», kuti pakati pake wega kurongedza uye maitiro ehunhu ipa mukana wekuti Vashandisi vezvimwe chete, vagone gadzira yako wega akagadziriswa uye akagadziridzwa vhezheni muIO fomati kusvika pazvinogona, ine maficha nyowani uye kugona, kuti uwane mhando ye «Distro personalizada» kuti vanogona kuzogovana nenharaunda kana mapoka.
1 Chii Chitsva muMX-Linux 19 - Beta 1 (MX-19b1)
1.1 Yakagadziridzwa pasuru
1.2 Zvirongwa zvakabatanidzwa
1.4 Kuiswa kweMX-Linux
1.4.1 1 danho
1.4.2 2 danho
1.4.3 3 danho
1.4.4 4 danho
1.4.5 5 danho
1.4.6 6 danho
Chii Chitsva muMX-Linux 19 - Beta 1 (MX-19b1)
Zvinoenderana nebhurogu yake yepamutemo «MX-Linux 19» mune rake «versión Beta 1» ine zvinotevera nhau:
Nyowani base pasuru kubva pane ichangobva kuburitswa vhezheni ye DHEVHANI 10 (Buster), pamwe neyakagadziriswa uye yakagadziriswa base package yeiyo Zvinyorwa zveiyo antiX uye MX Nharaunda.
Mapaketi e Yakagadziridzwa firmware kune dzazvino vhezheni dziripo.
LibreOffice - 6.1.5 (Mamwe macomputer ekuchengetedza)
Pakati pevamwe vazhinji, vakatoverengerwa uye vanowanikwa mune avo akadzika midzi.
Is «versión Beta 1» de «MX-Linux» inowanikwa kubva 25 Nyamavhuvhu 2019, inowanikwa kurodha yakananga pane saiti ye SourceForge, kubva kuiyi inotevera link:
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ivo vavaki, Ivo vakaburitsa iyi beta yekuyedza chete uye kwete kuve inojekesa kana yekupedzisira modhi yekushandisa zvakanyanya.
Mushure mekurodha pasi iyo «Imagen ISO», kuteedzerwa kune a «CD/DVD/USB» kuyedzwa pamidziyo yemuviri kana muchimiro chedigital kuti uongororwe pa «Máquina Virtual (MV)» uye yakatanga (kubhurwa) mune chero eakaviri kesi akafumurwa, inotanga neinotevera skrini:
Mune izvi Welcome screenKana zvichidikanwa, uye nesarudzo yemushandisi, sarudzo dzebhutsu dzinofanirwa kugadziridzwa uchishandisa makiyi ekushanda «"F2", F3", F4", "F5", "F6" y "F7"». Ndedzipi dzinoenderana nekugadziriswa kunotevera:
Mutauro weF2: Para seta mutauro umo iyo Startup System uye iyo distro inofanirwa kuratidzwa. Izvi zvichave zvakafanana izvo zvinobva zvangoendeswa kune hard drive kana yaiswa kunze kwekunge zvaratidzwa zvimwe.
F3 Nguva Zoni: Para seta nguva yenguva izvo zvichatonga iyo distro mune yehupenyu fomati (rarama). Izvi zvichave zvakafanana izvo zvinobva zvangoendeswa kune hard drive kana yaiswa kunze kwekunge zvaratidzwa zvimwe.
F4 Sarudzo: Para gadzirisa nguva nemusi parameter iyo inoshandiswa pakutangisa iyo Live system. Izvi zvichave zvakafanana izvo zvinobva zvangoendeswa kune hard drive kana yaiswa kunze kwekunge zvaratidzwa zvimwe.
F5 Kutsungirira: Para gonesa kupfuurira chimiro kana uchishandisa mufananidzo pane USB drive, ndiko kuti, kuchengetedza shanduko dzinoitwa muRarama USB painodzimwa (yakavharwa).
F6 Safe mode: Para ita graphical optimization kurodha iyo distro, kunyanya padanho rekugadzirisa vhidhiyo kudzikisira kukundikana kwebhutsu.
F7 Console (chinouraya): Para gonesa kugadzirisa shanduko pane chaiwo macompso. Inobatsira kutanga wekuraira mutsara kumisikidza kana kugadzirisa yekutanga yekutanga maitiro. Iishandise zvine hanya, sezvo aya ma parameter anogona kukonzera kupokana neiyo kernel mode marongero. Iyi sarudzo inotakura kana iyo Distro yaiswa.
Kana yambogadzirirwa, zvese zvinosara kudzvanya kiyi «Enter» nezve yekutanga sarudzo inonzi «MX-19beta-1 x64 (August 25, 2019)» uye wobva watevera matanho ari pazasi kutanga live Distro, gadza, reboot uye bvunzo.
MX-Linux Kutanga Boot
MX-Linux Kunyorera Ongororo
Sezvinoonekwa, «MX-Linux» Mune yayo yekutanga beta, ndizvo zvazvino vimbisa. Yakareruka, yakajeka, yakanaka uye inoshanda Distro. Uye zvakare, sezvambotaurwa kare, kurongedza kwayo kunoshamisa kunosanganisira zvirongwa zvakaita se «MX Snapshot», chinova chishandiso chinokutendera kuti iwe ugadzire iyo «Imagen ISO» yakagadzirirwa uye yakagadziriswa yezvazvino «Sistema Operativo», sezvazviri nhasi. Yakanyanya kufanana ne «Remastersys y Systemback».
Uye pakupedzisira, inosanganisira nezviviri zvinoshandiswa zvinodaidzwa «MX Live USB Maker (Creador de USB Vivo MX)» y «dd Live USB» yakagadzirira kushandisa kurekodha iyo «Imagen ISO» yeiyo nyowani yakagadzirirwa uye yakagadziriswa distro yeiyo yazvino «Sistema Operativo» pamusoro peimwe «Unidad USB».
Zvisinei, iyo Distro iyo inofanirwa kuongorora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » MX-Linux 19 - Beta 1: Distrowatch Distro # 1 inogadziridzwa
Zvakanaka, zvinofanirwa kutaurwa kuti pakati pehunhu hwayo hukuru ndeyekuti inoshandisa SysVinit seyakagadzika yekutanga system kunyangwe iine systemd yakaiswa asi isina kuvhurwa. Shandisa systemd-shim kutevedzera iyo systemd mabasa ayo mamwe mapurogiramu anoda. Zvichida ichi ndicho chikonzero chiri chekutanga mune chinzvimbo uye chine vateveri vazhinji.
Zvakanaka, zvinofanirwa kunge zviri zveizvozvo nekuti hazvizove zvekunaka nekuti zvakashata pane kurova baba
Yakavanzika Sandbox, chikumbiro cheGoogle chemashambadziro ekushambadzira anotarisira zvakavanzika zvevashandisi